CALEEMAHA QASHINKA LEH: SHARAXAADDA, NOOCYADA, SAWIR, MEESHA UU KU NOOL YAHAY, WAXA AY KU QUUDINEYSO - BEERAHA DIGAAGA
Qoyaan leh: waxa ay u eg tahay, meesha uu ku nool yahay, waxa ay cunaan
Iyadoo horumarinta tiknoolajiyada, waxay noqoneysaa mid sahlan in lagu sii hayo xayawaanka noocyada kala duwan ee xayawaanka iyo shimbiraha. Joogitaanka fursadaha noocan oo kale ah ayaa si weyn u dardar gelinaya xiisaha guryaha digaaga iyo xoolaha xoolaha dambe. Caleemaha lafdhabarta ah ayaa gabi ahaanba aan loo hirgelin si ay ugu noolaadaan xaaladaha cimilada iyo juqraafi ee qaabka dabiiciga ah, si kastaba ha ahaatee gacan-ka-qabashada khibradaha qaar ayaa weli suurtogal ah in lagu gaaro hirgelinta guusha ee shimbiraha. In this article waxaan ka hadli doonaa dheeraad ah oo ku saabsan this caleen.
Ugu horreyntii, qofkii go'aansaday inuu bilaabo shimbiraha kor ku xusan, waxay noqon doontaa mid muhiim ah in la barto sida noocan oo kale ah xamaam oo laga yaabo inay ka mid yihiin walaalahooda caanka ah ee yar yar. Tani waxay iska ilaalin doontaa dhibaatooyinka iyo khiyaanooyinka kala duwan ee qayb ka mid ah iibiyeyaasha marxaladda iibsashada laba shimbirood kuwaas. Hoos waxaan ku siinaynaa sharaxaad qiyaas ah oo muuqaalka muuqaalka ah ee xamaamyada caleemaha, iyo sidoo kale qaababka dabeecada dabeecadooda.
Ma taqaanaa? Mararka qaar waxaa suurtagal ah in la kala saaro qoolleyda caanaha laga soo qaado ragga noocyadaas ah! Calaamadda kaliya ee lagu kalsoonaan karo ee ka tirsan jinsiga labka ah ee shimbirahaasi waa sheyga dhawaaqyo qayaxan oo gaar ah marxaladda horudhaca ah.
Sharafta ugu quruxda badan iyo sababta ugu weyn ee aad u helaysid shimbirahan waa muuqaalkooda aan caadi ahayn, muuqaalkoodu muuqaalkoodu yahay. Waxay ku kala duwan tahay midda ku xiran nooca gaarka ah ee qoryaha, laakiin guud ahaan shimbiraha waxay u muuqdaan wax sidan oo kale ah:
torso. Nooca Trapezoidal, xarrago iyo iftiin, ma laha nidaam muruq gooni ah, wuxuu abuuraa aragti ah isku dheelitir iyo isbeddel, daboolay baalal gaaban, baaldiyo qafiif ah,;
qoorta. Gaaban, dhuuban, xarrago leh, si siman u xirta madaxa jidhka, ee deganaansho ayaa ku yaal meel adag oo u dhow dhulka;
madaxa Aad u yaryar, habdhaqan, qaab muuqaal ah, had iyo jeer si adag loola barbar dhigo dhulka, qaybta falxumadu waa mid aad u kacsan;
baalasha. Xoogaa, aad u ballaaran oo si fiican loo horumariyey, daboolay gaar ahaan boogaha cufan, oo soo saaro walxo shay, midabkoodu wuxuu noqon karaa wax yar oo madow ka badan midabka boogaha daboolaya jidhka;
indhaha Cabbiryada yaryar, cad, wareeg, badanaaba casaan, indhaha ku haysa waxaa jiri kara nooc ka mid ah baaluq, oo midabkiisu kala duwan yahay midabka weyn;
gagaarka Fikradaha xamaamyada kale, ee qaabka pyramidal elongated, waxay ku xoogan yihiin qiyaasta, xooggan, xoogaa hoos loo dhigo dhamaadka, saldhigga waa nadiif, sanka dulalka;
cayayaanka Qaabtiisa, waxay u egtahay nooc ka mid ah dharka xargaha, wuxuu ka kooban yahay baal mugdi ah, mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay santuuq saddex xagal ah dhamaadka dhaadheer iyo naadir, jilicsanaanta calaamadaha dhererka, dhererka - 5-9 sentimitir;
daboolka. Waxaa si fiican loo horumariyey, daboolay 16-18 dheer, baadad cufan oo cufan, ballaaran, oo dheer, waxay yeelan kartaa wareega yar ee ugu dambeeya, ee ku yaal hanti dawan oo ku dhajiya jidhka xagasha 5-10 °;
midabaynta. Marwalba qurux badan oo qurux badan, way kala duwanaan kartaa iyada oo ku xiran noocyada gaarka ah ee xamaamka, badanaa qalad, buluug, buluug, buluugo leh isku dhafan kala duwan, tiro yar oo baalal ah oo midabo cad ah ayaa loo oggol yahay.
Ma taqaanaa? Qolka xayawaanka leh waa noocyo halis ah. Xayawaankoodii ugu dambeeyay, shimbirahan waxay ku dhowaadeen gebi ahaanba, sababtoo ah dadku waxay ku qiimeeyeen quruxdiisa gaarka ah ee boodhka iyo tuft.
Shimbirahaasi waxay leeyihiin habdhaqan aad u wanaagsan oo caddaalad ah, taas oo ay ugu badantahay sababtoo ah la'aanta cadowga dabiiciga ah ee duurjoogta ah. Looma yeedhin xishood, si degan oo aan loo weerarin qof, oo leh caado qaabaysan oo u oggolaanaya in ay naftooda ku qaataan gacmahooda, si ay u muujiyaan muuqaalkooda iyaga oo ku ciyaaraya baaluq, marmarka qaarkoodna xitaa ay u muuqdaan sawir qaadid. Waxay had iyo jeer u hoggaansamaan noloshooda nolol maalmeedkooda, iyo inta lagu jiro maalinti waxay inta badan raadiyaan cunto ama u diyaariyaan buul. Iyadoo bilawga xilliga maadada, waxay bilaabaan inay inta badan waqtigooda u qaataan lammaanahooda ama baaritaankiisa (haddii ay dhacdo in shimbirku yaryahay). Caleemaha qoryaha, sida swansiska, inta badan waxay sameeyaan laba-labo mar iyo dhammaan nolosha.
Baro noocyada iyo jilicsanaanta xamaamyada.
Shimbiraha yaryar waxay u muuqdaan inay la wadaagaan dhalinyaro kale oo dhalinyaro ah oo ay ilaalinayaan. Lammaaneyaasha da'da ah ee da'da yar waxay ku nool yihiin wax yar, laakiin waxay weli ku dhow yihiin inaanay ka tagin dhulka xayeysiiska ah oo waligood marna ka tagin.
Shimbirkan, inkastoo baalashooda cajiib ah, waxay jecel yihiin in ay u guuraan dhulka ama geedo cagaha, iyada oo gacan ka heleysa cawlaha. Duulimaad waxaa inta badan loo adeegsadaa habka looga baxsan karo khatarta ama u guurista deegaan cusub. Duurjoogta, dhaqdhaqaaqa ugu jecel inta lagu guda jiro wakhtigii aan la helin raadinta cuntada waa la fadhiisanayaa oo wuxuu ku ridi doonaa geedcanab iyo geedo geedo ah.
Noocyo ee qajaarka tufaaxa
Sida hore loo xusay, waxaa jira noocyo dhowr ah oo ah xamaamyada loo caleemo, kuwaas oo ku kala duwan waxoogaa ah xudduudaha dibadda, laakiin aad u kala duwan yihiin deegaanadooda, kuwaas oo aan waligood isbarbar dhigin midba midka kale. Guud ahaan, waxaa jira saddex nooc oo shimbir ah oo dabiiciga ah: caleemaha buluugta ah, fan-qaadista iyo joodar-caarada. Hoos waxaan ka eegnaa sifooyinka kala duwan ee mid kasta.
Akhri ku saabsan taranka dilka iyo xamaaminta hilibka.
Midabka buluuga ah
Wakiilka ugu weyn ee noocyada caleemaha caleenta ah, miisaankiisu wuxuu gaari karaa ilaa 3 kg, iyo dherer - illaa 80 cm Daqliga duurka, waxaa laga heli karaa oo kaliya qeybta koonfurta ee New Guinea. Muuqaalka ugu muhiimsan ee muuqaalka shimbirahan waa in tuftkoodu leeyahay jilcan, hodan, jilicsan, buluug, iyo ma jiraan wax loo yaqaan 'triangular pallets' on it, mid kasta oo ka mid ah baalasha ka samaysan tuft, kuwaas oo dhammaan noocyada kale ee shimbiraha leeyihiin.
Qeybahan hoose, shaki la'aan, ugu soo jiidashada saddexda jira ee xudduudaha dibadda. Goobta xuddunka ah ee ku taala waa xaafadaha waqooyiga ee New Guinea iyo jasiiradaha ku dhasha - Yapen iyo Biak. Muuqaal aad u kala duwan oo ka mid ah subspecies ee xamaamka waa crave, qaabka u eg oo taageere fanaan furan, kaas oo la xidhiidha qaab gaar ah iyo habaynta of baadad on madaxa. Cabbirka qaybahan hoose waa mid aad u cajiib leh: miisaanka wuxuu gaari karaa ilaa 2.5 kg, iyo dherer - ilaa 73-75 cm.
Noocyada, kuwaas oo wakiilada ee duurjoogta ugu yaraa. Miisaanka ugu yar ee la barbardhigo walalahiisa: miisaanka ugu sarreeya wuxuu gaaraa 2 kg, dhererkuna aanu ka badnayn 70 cm. Muuqaalka ugu muhiimsan ee dibedda waa midabka caleenta caleenta caleenta ama caleemaha, iyo sidoo kale cufur aan caadi ahayn oo aan la taaban karin marka la barbardhigo hoosaadyada kale. Guryaha dabiiciga ah - qaybta dhexe ee jasiiradda New Guinea.
Halkaas oo deggan
Sida kor ku xusan, qaybta aasaasiga ah ee qaybinta shimbirahan waa jasiiradda New Guinea iyo dhowr jasiiradood oo yaryar. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in jasiiradahaas jasiiradaha ku yaalla kaymaha kulaylaha ay ku habboon yihiin noloshooda, maaddaama kaliya ay halkaas ka heli karaan cunto iyo hoy ka imanaya cimilada xilli roobaadka.
Fiiri tobanda ugu sarreeya ee ugu caansan ee xamaamka.
Heerka deg dega ah ee magaaleynta iyo dhirbaaxada ayaa saameyn ku yeelan kara baahinta iyo badnaanta xayawaanka caleenta ah ee aadka u liita, maadaama ay gabi ahaanba aaney ku haboonayn nolosha deegaanka magaalooyinka. Ma heli karaan cunto naf ahaaneed, qalab dhismaha dhismayaasha, aad bay u adag tahay inay dib u dhisto qaababka wareegga wareegga iyada oo la tixgelinayo helitaanka nalal saacad-saacad ah, markaa haddii ilbaxnimadu ay timaaddo degaankooda, waxay u guuraan dhul aan la dabooli karin ama ay u dhintaan waqti ka dib.
Waxa la cuno
Falsamaan shimbirahan waa cuntooyinka dhirta. Iyadoo farxad weyn ay cunaan miraha kala duwan ee kuleylka ah ee ku koraya geedaha, berry, gaar ahaan jacaylka abuurka (mararka qaarkood xitaa ma diiraan jidhka, jebin goglaygooda si aad u hesho abuurka oo aadna u tagto), haddii aadan helin cunto koraya oo geedka, waxay bilaabi karaan cunidda miraha jiifa dhulka.
Waa faa'iido leh in la ogaado waxa xamaamyada ay guriga ku cunaan iyo sida loo cuno chick pigeon.
Haddii aysan suurtagal ahayn in la helo cuntada dhirta, waxaa laga yaabaa in ay bilaabaan in ay gurguuraan jilbaha dhirta, si ay u helaan wax kasta oo dirxi ah, sariiro, xayawaanno ama cayayaanka kale, laakiin inkastoo tani, marna ma raadinayaan cunto marka ay dhulka ku qodayaan. Ha diidin cuntada ay dadku siiyaan, inta badan xitaa xitaa u oggolow in ay naftooda ku quudiyaan gacmahooda. Marka xayawaanku si dhammeystiran u darsato cunnooyinka cuntada ee aagga ay ku saleysan tahay, waxay u duushaa waqti kale, cunto kale oo taajir ah.
Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee habka caadiga ah ee waxqabadka muhiimka ah ee idaha guud ahaan iyo unugyada shakhsiga ah ee qaabka lamaanaha is-guursadey waa habka dhalmada. Waa in la ogaadaa in caleemaha loo caleemo saaray wareegga dabiiciga ah ee dabiiciga ah oo la socda qaar ka mid ah sifooyinka aad tahay inaad ka war hayso haddii aad rabto inaad shimbirahaas ku haysato maxaabiista. Hoos waxaa ku qoran sharaxaadda ugu muhiimsan ee sifooyinkaas.
Sidii hore loo soo sheegay, xamaamyada loo caleemo saarnaa waxay had iyo jeer abuuraan labo jeer hal mar iyo nololba, inkastoo ay jirto fursad yar oo lagu dhisayo lamaane cusub haddii uu hore u dhintay ama ka lumay kartida wax soo saarka. Isku duubnaanta ficilka ah waxaa ka horeeya isku duba rituals ah oo ka dhacda dhulka kaliya ee ku dhex yaalla xirmada, laakiin isla mar ahaantaana, mid kasta oo ka mid ah raga dhalinyarada ah waxay ku dhalin karaan dumarka kaliya ee dhulkooda yar. Bilowga xilliga taranta waa dayrta.
Waa muhiim! Maqnaanshaha abuuritaanka laba qof oo cusub ka dib dhimashadii lamaane hore ee haweenku waa amar aad u sarreeya oo ka sarreeya ragga, sidaa daraadeed ha u degdegin si ay uga takhalusto haweeney ay lumisay lammaanaha - waxaa laga yaabaa inay wali awoodi karto inay ku adeegto.
Mid kasta oo lab ah ayaa si tartiib tartiib ah u bilaabmaa inuu hanti yeesho, isaga oo sameysanaya dhawaaqyo isku mid ah daadad aan caadi ahayn. Dumarka dhalinyarada ah waxay u duulaan adhiga oo dhan, dhegeysta dhawaaqyadan, iyo marka ay helayaan rag ku habboon, waxay ku fariistaan ​​dhulka aan ka fogeyn isla markaana bilaabaan jilbaha. Ka dib, waxay doortaan meel loogu talagalay beerta buulka ee dhulka ay deganyihiin ragga, waxayna ku shubaan wakhti aad u dheer si ay u muujiyaan shimbiraha kale ee gurigooda ku yaala. Taas ka dib, geedi socodku wuxuu dhacaa, isla markiiba ka dib marka ay labaduba bilaabaan geedi socodka abuurka buul. Shaqada ugu weyn ee raadinta qalabka waxaa sameeya rag, halka haweenku ugu horreyn ku hawlan yihiin samaynta tooska ah ee buulka.
Akhri ku saabsan isugeynta xamaamka iyo sifooyinka geedi socodkan.
Inkastoo ay jecelyihiin dabiiciga ah ee duulimaadka ah, waxay ka dhigi karaan hareerahooda meel sare - celcelis ahaan aan ka yarayn 6-10 mitir ka sarreeya dhulka. Dhamaadka dhismaha cayayaanka, haweenku waxay dhigtaa ukunta dhexdeeda iyo geeddi-socodka uurjiifka ayaa bilaabmaa.
Badanaa, qoollada ayaa kaliya hal ukun ah, marar dhif ah, laba ama saddex. Mid kasta oo ka mid ah ukumahaasi wuxuu miisaankiisu yahay 70-80 g. Nidaamka dhan ee maskaxdu wuxuu qaadanayaa celcelis ahaan 28-30 maalmood. Labada waalidba way firfircoon yihiin marxaladdan farcankiisa taranta. Xaaladdan oo kale, aabbaha qoyska wuxuu ku fadhiyaa ukumaha maalintii, iyo hooyada - habeenkii. Inta lagu jiro muddadaa, waa arrin dhib badan in la helo xamaam, sababtoo ah isla markiiba ka dib markii ay ku filan yihiin, waxay ku soo kabsadaan buulka. Mararka qaarkood labadaba waxay sameeyaan duulimaad looga hortagayo dhul ay ku jiraan si ay u cadeeyaan shimbiraha kale ee la daggan yahay iyo in aan la dhisin dhismaha cusub.
Soo ogow inta xabbo yaryar ee fadhiya ukumaha.
Xilligan marxaladda taranku, shuraakayaashu waxay raadinayaan inay wakhti badan la wadaagaan, isku dayaan inay keenaan daweyno kala duwan oo midba midka kale u ilaaliyo. Qoollad kastaa waxay isku dayeysaa in ay waqtigeeda u dheertahay sida ugu macquulsan si ay u sii dheeraato raadinta cuntada, waxaa kale oo ay leedahay wakhti ay ku duulaan hareeraha lamaanaha kale iyo "hadal" dumarka kale.
Ka dib marka geedi-socodka hirgelinta la dhammeeyo, lakabana dhasho, ragga ayaa bilaabay in ay waqti badan ku qaataan raadinta cuntada kala duwan ee qoka, kaas oo ah in ay si joogta ah u yimaadaan soo socda ee chicks. 3-7da maalmood ee ugu horeeya, qoob-ka-qaadku wuxuu si khaas ah u-quudiyaa si toos ah oo uu si toos ah ugu galo godka afka oo leh cunto yar oo dheef-shiid ah oo ka yimaada caloosha hooyada. Mararka qaarkood, haddii haweenku u baahan tahay in laga tago buulka aag, hooyada qoyska ayaa qaadi karta hawlaha hooyada.
Waa muhiim! Ka dib marka ay tuugadu raacaan cunto caadi ah, waxay bilaabaan inay muujiyaan calaamadaha ugu muhiimsan ee madaxbannaanida: carbinta, isku dhejinta qaylada, boogahooda baalashooda, iwm. Inta lagu jiro muddadan, waxaa lagama maarmaan ah in si gaar ah loogu fiirsado saamiyada dhallinyarada, maadaama ay suurtagal tahay in laga soo kabsado buulka.
Dumarku marar dhif ah ayey u ogolaataa in ay ka tagto buulka, ka ilaalisa ilmaha in ay ka soo dhacaan dherer, iyo sidoo kale si joogta ah u baadha aagga ku hareeraysan khatarta iman karta. Hawsha ugu weyn ee labka ah muddadaas, marka laga reebo helitaanka raashinka naftiisa iyo haweenkaba, waa ilaaliyaha joogtada ah ee degaanka uu degan yahay qoyskiisa si uu u aqoonsado khatarta suurtagalka ah iyo inuu ku wargeliyo xubnaha kale ee baakadka ee degaanka.
Jadwal isku mid ah oo leh kala duwanaansho yar oo u dhaxeysa labada waalid muddo 35-40 maalmood ah, oo xilligaas oo ay tuugadu leeyihiin xeedho, waxay sameeyaan duulimaadkooda koowaad waxayna bartaan dheddigga si ay u quudiyaan. Hoobiyadu waxay sii wadaan inay ku noolaadaan meel u dhow waalidkood ilaa 2 sano oo kale.
Ma suurtagal in la jebiyo maxaabiista
Noocida noocan oo kale ah xamaamyada xaaladaha cimilada waa mid dhib badan, laakiin wax badan oo la fulin karo. Ugu horreyntii, si loo abaabulo xaalado ku filan dhalashada iyo degaannada shimbiraha sida, waa lagama maarmaan in la daryeelo deegaankooda mustaqbalka. Waa lagama maarmaan in la abaabulo goobo (ugu yaraan 10 mitir oo laba jibbaaran), kuleylka (heerkulku waa inaanay hoos u dhicin + 20 ° C), xero xiran. Shimbirahan ayaa si xun u falceliya, sababtoo ah dabeecadooda dabiiciga ahi waxay gebi ahaanba ka fogaanaysaa waxkasta oo qabow ah. Ku soo noqoshada jawi qabow, waxay si dhakhso ah u xanuunsadaan hargab, taas oo markaa ka gudubto infekshanka bakteeriyada iyo inta badan waxay ku dhamaanaysaa dhimashada. Taasina waa sababta ay ugu baahan yihiin caynkaas oo kale.
Qolka meesha qajaarka loo caleemo saaray, waa lagama maarmaan in la abaabulo nooc ka mid ah xayawaanka kaynta. Waxaad ku dhejin kartaa weel dhaadheer, dherer dheer, geedo dhaadheer ama geed dheer oo leh geedo farabadan oo badan, oo ku haboon in lagu abaabulo buul. Sidoo kale marka hore, waa inaad hubisaa in aad bixiso qadarka macquulka ah ee dhismaha ee buulka.
Waxaan kugula talineynaa inaad baratid sida loo dhiso dovecote, iyo sidoo kale samaynta quudinta quudinta iyo cabitaanka qaxwada gacmahaaga.
Maxaabiis ahaan, badi shimbirahaas waxay doorbidaan inay cunaan noocyo kala duwan oo firiley ah: masago, buunshaha, bariis, galley, iwm. Mararka qaarkood waxaa lagu siin karaa noocyo kala duwan oo ah miraha, digir, galley. Qoysas badan ayaa sidoo kale waxay ku talinayaan marmarka qaarkood inay quudiyaan qaybo yaryar oo ah noocyada kala duwan ee cuntada xayawaanka, sida shinbiraha ama gooryaanka cuntada, si ay u kobciyaan. Sidaa darteed, waxaan rajeyneynaa in aad baratay dhammaan dhinacyada aad xiiseyneysid ee ku saabsan nabraha loo caleemo saaray. Xasuuso in xayawaannada xayawaanka iyo shimbiraha aysan aheyn shaqeyn sahlan oo raqiis ah, laakiin faa'idada laga heli karo dhammaadka, waxay ka badan tahay magdhaw dhammaan kharashaadka bilawga ah. Intaa waxaa dheer, haddii aad u soo jiidatid geeddi-socodka jacaylka iyo daryeelka, waxaad heli doontaa waayo-aragnimo iyo waayo-aragnimo xiiso leh, oo laga yaabo inaad xiiseyneyso inaad la wadaagto beeraleyda kale ee digaaga.